Maxaa ka jira in shaqo joojin ay sameeyeen Kalluumeysatada Berbera? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in shaqo joojin ay sameeyeen Kalluumeysatada Berbera?
Berbera (Halqaran.com) – Kalluumeysatada magaalada Berbera ayaa sheegay inay Shaqo la’aan la soo deristay, kaddib markii ay badda ku dhufteen dabeylo saameeyey howlahooda kalluumeysiga.
Dabeylahan oo badanaa bilaha lixaad iyo toddobaad ku dhufta Berbera ayaa lagu soo warramayaa inay yihiin kuwa aad u xooggan.
Bisha Toddobaad laash ay kalluumeysatadu lahayd oo badda ku ambadayna waxaa ku dhintay hal qof, iyada oo qaar kalana la soo badbaadiyey.
Maamulaha kalluumeysatada Berbera Ismaaciil Cabdi Xirsi (Saar-Saar) ayaa sheegay in xilligan aysan jirin kalluumeysato ka jilaabaneysa Xeebaha Magaalada Berbera, isla markaana dabeysha socota ay saameysay kalluumeysatada.